१० करोड माथि कमाएका बक्सअफिसका टप ६ फिल्म « रंग खबर
१० करोड माथि कमाएका बक्सअफिसका टप ६ फिल्म
रंगखबर, काठमाडौँ – नेपालमा बक्सअफिसको आधिकारिक तथ्याङ्क आउने कुनै स्रोत छैन । तर, पनि वर्ष भरि फिल्मको व्यापारिक रिपोर्ट र रेकर्ड तोडेका समाचारहरु प्रकाशन भैरहन्छन ।
ठ्याक्कै यति कमाएको यकिन तथ्यांक नआए पनि अनुमानित रिपोर्टले बक्सअफिसको नाम जोगाउँदै आएको । होइन भने, अहिलेसम्म यो शब्द लोप भैसकेको हुने थियो । वि.सं. २०७१ यताको ६ वर्षमा बक्सअफिसका थुप्रै रेकर्ड भत्किए । रिपोर्ट केलाउने हो भने, १० करोड क्लबमा ५ फिल्म समावेश भैसकेका छन् । र, प्रदर्शनरत ‘ए मेरो हजुर ३’ यसको नजिक छ । फिल्मले लाइफटाइम १० करोड माथिको ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
१० करोड क्लबको पहिलो फिल्म ‘कोहिनूर’ हो । २०७१ मा रिलिज हुँदा यसले ११.५ करोडको व्यापार गरेर रेकर्ड बनाएको थियो ।
कोहिनूरको रेकर्ड तोड्यो छक्का पन्जाले
अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठ दिवंगत भएपछी ‘कोहिनूर’ले बक्सअफिसमा आँधी ल्यायो । सुरुवाती व्यापार कमजोर रहेपनि दर्शक, श्रीकृष्णको अन्तिम फिल्म हेर्न हलसम्म उर्लिए । संसारबाट विदा माग्दै गर्दा श्रीकृष्णले एतिहाँसिक व्यापारिक रेकर्ड राख्दै ब्लकबस्टर फिल्म दिए । फिल्मले अलनेपाल ११.५ करोडको व्यापार गर्यो ।
त्यसअघि सर्वाधिक व्यापार गर्ने फिल्मले ५ करोड आसपासको अंक छुन्थ्ये । त्यतिबेला ‘कोहिनूर’को व्यापार सचिक्कै आश्चर्यजनक नै थियो ।
कसैले पनि सोचेका थिएनन्, होला ‘कोहिनूर’को रेकर्ड २ वर्षमै तोडिन्छ भनेर । २०७३ मा रिलिज भएको ‘छक्का पन्जा’ले ‘कोहिनूर’लाई पछि पार्दै १६ करोड ग्रस कलेक्सन गर्यो ।
२०७४ मा दुई फिल्मको व्यापार १० करोड माथि
‘छक्का पन्जा’को रेकर्ड तोड्न ‘छक्का पन्जा २’ रिलिज भयो । सुरुवाती व्यापारमा आक्रामक देखिएको ‘छक्का पन्जा २’ले सबै रेकर्ड तोड्ने आशा गरिएको थियो । तर, कमजोर ‘वर्ड अफ माउथ’ले फिल्म १४.५ करोडको लाइफटाइम कलेक्सनमै रोकियो ।
यसै वर्ष रिलिज भएको ‘शत्रु गते’लाई ‘छक्का पन्जा’को रेकर्ड तोड्न सक्ने फिल्मको रुपमा हेरिएको थियो । तर, १३ करोड व्यापार गरेको फिल्मले ‘छक्का पन्जा २’को कलेक्सनलाई पनि उछिन्न सकेन ।
२०७५ मा तोडियो ‘छक्का पन्जा’को रेकर्ड
व्यापारिक हिसावले कमजोर मानिएको साल २०७५ मा ‘छक्का पन्जा ३’ले अर्को ठुलो रेकर्ड राख्यो । ‘छक्का पन्जा’ रेकर्ड तोड्दै फिल्मले १९.१ करोडको व्यापार गरेको दावी निर्माण पक्षले गरेका छन् ।
गत वर्षनै प्रदर्शनमा आएको ‘ए मेरो हजुर ३’ १० करोड क्लबको कान्छो सदस्य बन्ने ट्रेडको अनुमान छ । फिल्मले चौथों साताको अन्त्यसम्म ९.५ करोडको व्यापार गरिसकेको छ ।
रहेनन् कलाकार जयनन्द चन्द ठकुरी !
कलाकार जयनन्द चन्द ठकुरीको ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनले आइतबार विहान आफ्नै
बजेट भाषणमा फिल्म: यस्ता छन् कार्यक्रम
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को बजेटमा फिल्म क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । विहिबार अर्थमन्त्री डा:
अभिनेत्रीको फेक अश्लिल भिडियो बनाउने विरुद्द कलाकार संघको उजुरी
नेपाली अभिनेत्रीहरुको फेक अश्लिल भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्ने भारतीय विरुद्द नेपाल चलचित्र कलाकार संघले महानगरिय अपराध
नेपालको पक्षमा बोल्दा मनिषा विरुद्द भारतीय मिडियाको प्रहार
रंगखबर, काठमाडौँ – अहिले नेपाल-भारतको सिमा विवाद उत्कर्षमा छ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको
बलिउड नगरीमा छायांकनको अनुमति, पालना गर्नुपर्नेछ यस्तो गाइडलाइन
रहेनन् वाजिद खान, टुट्यो साजिद-वाजिदको जोडी